MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » President of Myanmar has appointed U Ko Ko Shein as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Russian Federation
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Ko Ko Shein, Deputy Permanent Representative at the Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva, Switzerland, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Russian Federation.
Dated. 28 June 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ဂျီနီဗာမြို့မှ ဒုတိယ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုရှိန် အား ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ ခန့်အပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။